Alia Bhatt Oo Tollywood Ku Biiri Doono Waxayna Filimkeeda Kowaad La Sameyn Doonta Akhil Akkineni - Hablaha Media Network
Alia Bhatt Oo Tollywood Ku Biiri Doono Waxayna Filimkeeda Kowaad La Sameyn Doonta Akhil Akkineni
HMN:- Quruxleyda dhalinta yar ee haatan Bollywood-ka hogaankiisa wax ka heyso dhanka atirishooyinka Alia Bhatt ayaa la sheegay inay Koonfur Hindiya shirkadaha ka dhisan gaar ahaan Telugu (Tollywood) ku biiri doonto.
Warbixintaan waxaa lagu sheega in Alia Bhatt ay sameyn doonto filim Tollywood ah oo ay la jileyso atooraha dhalinta yar Akhil Akkineni.
Sida ay daabaceyso shabakada Deccan Chronicle Alia Bhatt waxay fariin ka heshay Super Star Nagarjuna oo qoyska reer Bhatt xiriir dhow la leh wuxuuna rabaa in xidigtaan ay wiilkiisa Akhil Akkineni filimkiisa xiga la sameyso.
Qorshaha wuxuu ahaa in filimkaan Akhil Akkineni iyo atirishada Megha Akash wada sameeyaan balse Megha ayaa hawlo kale ku mashquulsan waxaana haatan la rabaa in Alia Bhatt lagu badalo.
Alia Bhatt haatan wax hawl ah ma heyso madaama filimada ay duubi laheed Dragan iyo Aashique 3 dib u dhaceen sidaa darteed waxaa siweyn loo wada hayaa in Alia ay aqbali doonto sameynta filimkaan Tollywood-ka ah.
Super Star Nagarjuna isaga ayaa filimkaan soo saare ka ah wuxuuna qorsheenaa bisha April bartamaheeda in duubistiisa ka bilaabato gudaha dalka Mareekanka.
Waxay noqon doontaa arin xiiso badan hadii labada dhalinta yar Akhil Akkineni iyo Alia Bhatt mashruucaan xiisaha badan kasoo wada muuqdaan.